GarsoorNews - Wasiir Jamaal Mashaqo Qaran buu wadaa mise Bur-burin Daarood?
by Farah C/laahi | Tuesday, Jan 2, 2018 | 84 views
Jamaal Maxamed Xasan Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa booqanaya deegaano ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka Soomaaliyeed ee Puntland.
Booqashada wasiirka waa mid wanaagsan, laakiin waxaa ka soo laabanaya su’aallo badan oo tuhun galinaya dadka bulshda Soomaaliyeed.
Waa Kuma Wasiir Jamaal?
Jamaal waa safiirkii hore ee dowladdii Xasan Sheekh u fadhiyay Kenya, waxana uu ka soo jeedaa deegaanadda Puntland.
Waa mid kamid ah saaxiibada nafta ay u dhexeyso Fahad Yaasiin oo ah Agaasimaha Madaxtooyadda, ahna wakiilka Sirdoonka Qadar u qaabilsan Soomaaliya.
Jamaal iyo Fahad waxa ay ka soo jeedaa reero aad siyaasada loogu ma quuniyo, waxana ka dhexeysa aragtida ah in la ciribtiro qaar badan oo kamid ah qabaa’ilaadka awooda ku leh siyaasada dalka.
Jamaal waa qofka labaad ee ugu Awooda badan Wasiirada Soomaaliya marka laga soo tago Ra’iisul wasaare Hassan Ali Kheyre, waxana uu ku jiifaa dhabarka Fahad Yaasiin oo ah Milkiilaha dowladda hadda jirta.
Wasiir Jamaal oo fulinaya Amaradda Fahad Yaasiin waxa uu safar ku tagay Puntland, waxana uu saxaafadda u sheegay in howllo la xiriira qorsheynta qaranka uu halkaa u joogo.
Laakiin sheekado sidaa waa ka fogtahay, maxaa yeelay waxa uu hada safar ku marayaa tuulooyin yar-yar oo ay reerihiisu dagaan oo ku yaal Puntland, waxana uu la shirayaa waxgaradka iyo cuqaasha.
Sida ay ii xaqiijiyeen ilo xog-ogaal ah waxa uu reerkiisa iyo reeraha kale ee aan aheyn Majeerteenka ku qancinayaa in Puntland la burburiyo, si loo wiiqo cududa gaamurta ee beelaha qaar ay ku lee yihiin Maamulkaas.
Wasiir Jamaal waxaa kaloo la soo sheegayaa in uu u dhargigtay sidii qof uu wado Fahad Yaasiin uu Madax uga noqon lahaa Puntland doorashada soo socota oo muddo ay ka horsan tahay.
Dadka yaqaan Wasiir Jamaal waxa ay ku sifeeyaan in uu yahay shakhsi hadal macaan, balse cuqdad badan hoota ka qaba, waxana uu wasaarada uu madaxda ka yahay ka ceyriyay dad siyaasiyiin isaga ka horeeyay ee keeneyn.
Jamaal Maxamed Xasan isagoo fulinaya danaha Fahad Yaasiin ee Turkiga waxa uu dhul wasaaradu lee dahay ku wareejiyay shirkad laga lee yahay dalka qadar taasi oo howla basaasnimo ah ka fulin doonta Magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya.
Ugu danbeyn, wasiir Jamaal Umadda Soomaaliyeed intoo badan hada ma arki karto dhagarta uu wado, laakiin waxaan ugu baaqi laheyn in uu joojiyo fulinta danaha shiyeeshe ee uu dalka ka wado.
Fagaase Faarax Gorod
Garoowe – Puntland – Somalia